Nkwado eziokwu nke nchekwa nchekwa na ngwaahịa nchekwa gburugburu ebe obibi
Post oge: Sep-01-2020
Multi mmewere elu arụmọrụ ihuenyo bụ humanized na ọgụgụ isi echetakwa akụrụngwa e mere site anyị ụlọ ọrụ dị ka ahịa ina na mmepụta omume. Performance na e ji mara nke multi mmewere elu arụmọrụ sc ...GỤKWUO »
Nhọrọ nhọrọ nke ihuenyo ntanetị
1. dịka nhọrọ nke saịtị A ga-atụle ogologo na obosara nke saịtị ahụ maka ụdị usoro nyocha vibration; mgbe ụfọdụ obosara nke npụta nke akara ngosi vibar na-ejedebe, yana ịdị elu nke saịtị m ...GỤKWUO »
Omume ọma jijiji moto waterproof
Usoro nyocha niile nke igwe eji egwu bụ iji nyocha ma debe ihe ndị ahụ. A na-ekewapụta ihe dị iche iche na ihe ndị dị elu na nke ala. Nchọpụta nyocha kwesịrị ịdị elu, onye ikwu pr ...GỤKWUO »
Ihe dị iche n’etiti igwe vibration na moto nkịtị
Mgbaji ọkụ: Ejiri igwe eletrik nwere setịpụrụ ihe ndozi nke ikuku nwere ike idozi ya na nsọtụ abụọ nke rotor rotor, a na-enwetakwa ike na-akpali akpali site na ike ikuku na-ebugharị site na ntụgharị ọsọ ọsọ nke ogwe na oghere eccentric. Ojiji nke uzo ogugu nke ...GỤKWUO »